VaMasaraure Voshanyirwa Mambakwedza neVanhu Vanga Vaine Pfuti
Vanhu vanga vakapakatira pfuti vanonzi vapinda zvechisimba pamba pemutungamiri wesangano revadzidzisi reAmalgamated Rural Teachers Union, VaObert Masaraure, mambakwedza eChishanu vachitsvaga VaMasaraure vacho, avo vanga vasiri pamba pavo.
Vachitaura neStudio7 parunhare, VaMasararure vati vaudzwa kuti vanhu vanga vachifamba nemotokari mbiri vakapakatira pfuti vasvika pamba pavo mumusha weWaterfalls kuma 1 kunze koyedza vakapwanya mikova yose yepamba pavo vachivatsvaga asi vanga vasipo pamba apa.
VaMasaraure vati vanhu ava vambunyikidza mudzimai wavo vakazomusiya chinhambwe chinodarika kiromita imwe chete kubva pamba pavo.
VaMasaure vanoti imwe hama yavo inogara kuKuwadzana yakashungurudzwa zvakare svondo rapera nevavari kufungidzira kuti vasori vaida kuziva kuti ivo VaMasaraure vaivepi.
VaMasaraure, avo vakambopambwa gore rapera nevanofungidzirwa kuti vasori vakasiyiwa varohwa zvakaipisisa, vanoti havasi kuzodzokera kumashure nekurwira zvido zvevarairidzi avo vavanoti vari kuda kubhadharwa nemari yekunze sezvo hupfumi hwenyika huri kuramba huchienda kumawere izvo zvave kukonzera kuti nhengo dzesangano ravo dzidye nhoko dzezvironda.
Kupindirwa kwaitwa VaMasaraure pamba pavo nevanhu vanga vakapakatira zvombo kwashora nemutungamiri wesangano reTajamuka, VaPromise Mkwananzi.
Zvaitika pamba paVaMasaraure zvekushanyirwa nevanhu vakapakaitira zvombo ndizvo zvimwechetezvo zvinonzi nevaimbova murongi wemisangano muboka revechidiki muZanu PF, VaGodfrey Tsenengamu, zvakaitika kumhuri yavo iyo yavanoti yakashungurudzwa husiku ivo vasipo kumba kwavo kuBindura svondo rapera.
VaTsenengamu vari kugara vachitsoropodza nyaya yehuori uhwo hwavanoti hwadzika midzi muhurumende yaVaEmmerson Mnangagwa.
Mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition, VaMarvelous Khumalo, vakurudzira hurumende kuti igadzirise zviri kunetsa munyika zviri kupa kuti vanhu vakaita saVaMasaraure nevamwe vagare vachigunun’una kwete kuti irove imbwa yakaviga mupinyi.
Mashoko aVaKhumalo aya anouyawo apo sangano riri kuzvidaidza kuti July 31st Movement riri kutungamirwa naVaJacob Ngarivhume richiti riri kuda kuratidzira munyika musi wa31 Chikunguru richiti harisi kufara nemariro akaita zvinhu munyika panyaya dzehupfumi pamwe nekutekeshera kwarinoti kwaita nyaya dzehuori munyika.
Asi mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZanu PF, VaTafadzwa Mugwadi, vanoti mapurisa haasi kuzosiya vanhu vachiita pamadiro vachityora mitemo yekuvharwa kwenyika nepamusana pechirwere cheCovid-19.
Mutauriri wemapurisa, VaPaul Nyathi, vaudza Studio7 parunhare manheru ano kuti vanga vasati vatambira nyaya yezvinonzi zvaitika kumba kwaVaMasaraure.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvekuburitswa kwemashoko, Amai Monica Mutsvangwa, kuti tinzwe tinzwe divi rehurumende sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo.